Vanopfuura 50 mhando kukarukureta. Kukarukureta pamusoro kanyika hwaro, ukuru edenga, yematanda masitepisi. Kuvaka Calculator.
Masvomhu pamusoro zvokuvakisa, kuvakwa Converter, uye vagadziri
Fenzi, masvingo, pamapuriro
Mavhoriyamu uye kukwanisa
Kutevera kuvakwa imba puranga yandiri kugara nomubvunzo Masvomhu uwandu zvokuvakisa kana ngaaverenge kukura chikamu magadzirirwo.
Kutema puranga, matanda kana zvimwe matanda kuti basa rokuvaka - sezvo inodiwa masvingo kana pasi?
Heaters dzinodawo kugara kukarukureta. Lovemore ichi chicherwa shinda, furo kana zvimwe kuputira. Sezvo Ndakanyorera, magadzirirwo imba marangwanda uye kuputira wangu zvinhu Ndinoshandisa nokuda kuputira, kwete chete pasi uye denga, uye masvingo.
Roofing - mumwe nyaya. Pedenga reimba zvakaoma yangu maumbirwo, overenga uwandu shingles zvesimbi kana zvimwe kuzvinhu zvokuvakisa chakaoma. Uye achiri zvakafanira kufunga dongo kuzvinhu. Uye pane imba kwemakore akawanda ane padenga denga remba.
Mumwaka unotevera achange kutarisana masvingo. Uyewo vaiona pachake kubatana, nemhute chipingamupinyi ...
Munhu aiziva chikoro nemasvomhu Chokwadi, Masvomhu aya hakuzovi kwakaoma. Tora pepa uye karukureta, yeuka yemaitiro, tarisa vaviri nguva ... Uye tarisa ... Kuti udzivise kukanganisa akanyahwaira hwakazara zvisingakoshi mari vari Masvomhu. On zvekufambisa, kana uine chimwe chinhu kutenga zvimwe, kana vakutarisire pasi akawandisa, nyore basa harisi kunaka chaizvo uye zvichingodaro.
Saka akaberekwa pfungwa kupfuura dzose Masvomhu aya pamapfudzi zvirongwa kuti wose ichataura uye kuzochera mufanidzo.
Uye kupfuura kukosha - ukasakanganisa! Pashure pezvose, mutengo kukundikana hahusvikirwi paivakwa.
Ndinovimba kuti basa rangu chichabatsira vaya vari kuvaka imba nemaoko ake uye mainjiniya-vavaki.